Shirka London oo rasmi ah u farmaya sagaalka aroornimo ee magalada London. - Royal TVRoyal TV
Shirka London oo rasmi ah u farmaya sagaalka aroornimo ee magalada London.
Posted on February 23, 2012 by editor1
(Royaltv)Waxaa saacaddaha soo socda magaalada London ee xarunta Dalka Ingiriiska ka furmaya shirkii ay maalamahan qaban qaabadiisu ka socotay halkaasi, iyadoo ay ka qeyb galayaan madaxda dowladda Soomaaliya, madaxa ka socota calaamka oo uu ugu horreeyo xog hayaha guud ee Qaramada Modoobay.
Shirka ay dowladda Ingiriiska marti galineyo ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa uu si rasmi ah u furmi doonaan saacadda dalka Ingiriiska marka ay tahay 90:00 Subaxnimo, waxaa uuna shirka ku billaaban doonaan kulammo ay wada qaadanayaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo Ra’iisul wasaaraha dalka Ingiriiska.
Qeybta Labaad ee shirka waxaa isna noqon doonaa in laga hadlo Ajandayaasha shirka oo la sheegay in horey loo qorsheeyay, iyadoo ay goobjoog ka ahaan doonaan madaxa kala duwan oo caalamka ka socota.
Madaxda shirka ku sugan ayaa waxaa ka mid ah xog-hayah guud ee Qaramada Midoobay Ban K-moon, xog-hayaha arrimaha dibedda ee dowladda Mareykanka Mss. Hilary Clinton, wasiirka arrimaha dibedda ee Faransiiska Alan Jube, ururro caalami ah iyo madax kale.
Shirka waxyaabaha inta badan looga hadli doona waxaa ka mid ah xaaladda ammaan ee Soomaaliya la hor tagidda burcad badeedda, xoojinta dowladda Soomaaliya iyo waxyaabo kale, waxaana la filayaa in shirka uu ku socda qaab is afgarad leh.